महिनावारि हुँदा पेट दुख्छ ? यसो गर्नुस् « Nepal's number 1 Entertainment news portal
महिनावारि हुँदा पेट दुख्छ ? यसो गर्नुस्
Published :2June, 2018 9:00 am
महिलाहरुलाई तनाब दिने भनेकै महिनावारि हो । महिनावारि हुँदा पनि समस्या नहुँदा पनि समस्या । हुँदा पेट दुख्ने ढाड दुख्ने अझ हिन्दू धर्ममा छोई छाई हुन्छ भनेर अलग्ग बस्नु पर्ने समस्या पनि रहेको छ । अरु सबै समस्या शाहअन सकेता पनि पेट दुख्ने कुराले कैयौ महिला दिदी बहिनिहरुको पढाई, अफिस वा कैयौ महत्वपूर्ण कामहरु रोकिएका हुन्छन् ।
हामीले सानो तिनो विरामी भयौँ भन्दैमा डाक्टरी औषधि सेवन गर्नै पर्छ भन्ने छैन्। हामीले घरेलु औषधिको सेवन गर्दा स्वास्थ राम्रो पनि हुन्छ तर सानासाना रोग पनि निको हुने गर्दछन्। अव पिर नगरनुस् , महिनावारि हुँदा पेट दुख्ने गरेको छ भने यसो गर्नुस् पेट दुख्न छाड्नेछ । आज हामीले विभिन्न समस्याका विरामीका लागि यस्तै एक घरेलु उपचारका बारेमा जानकारी दिदैछौँ ।
यदी तपाईलाई महिनवरी हुँदा पेट दुख्ने समस्या छ भने दुध र बेसार खाने गर्नुस् । बेसार भएको दुध पिउदा महिनावरीको क्रममा हुने दुखाई पनि कम गर्छ। दुध र बेसार यस्तो शक्तिशाली एन्टी सेप्टिक हुन्छ, जसले पेटको अल्सरलाई समेत ठीक गर्छ । यसले पाचनलाई राम्रो बनाउँछ। अल्सर, डाइरिया र अपच हुन दिदैन।
दुधमा बेसार मिसाएर पिउँदा त्यसले प्राकृतिक तरिकाले कलेजोको बिषाक्त पदार्थ निकाल्छ । यसैले गर्दा रगत शुद्धिकरण पनि हुन्छ । दुधमा बेसार मिसाएर पिउँदा पाचन प्रणाली चुस्त रहन्छ । तर, धेरै फ्याट भएको दुध सजिलै पच्दैन । बेसार र दुधको मिश्रणमा क्याल्सियम बढी हुन्छ । दैनिक यस्तो दुध पिउनाले हड्डी बलियो बनाउँछ । बेसारमा करक्यूमिन रहेको हुन्छ। यसले क्यान्सरको कोसिका रोक्ने क्षमता राख्छ। त्यसैले दुध र बेसार पिउदा क्यान्सरसँग लड्ने क्षमता पनि बढ्छ।